News - Waa maxay sababta bakhaarkaada dhererka had iyo jeer 24 m gudaha Shiinaha?
Waa maxay sababta dhererka bakhaarkaagu had iyo jeer u yahay 24 m gudaha Shiinaha?
Qaar ka mid ah macaamiisha ayaa i weydiiyay: sababta mashaariicdaadu ay mar walba u yihiin 24 m oo u muuqda inay midaysan yihiin, ma waxaad dhigaysaa?Maanta, kaliya waxaan rabaa inaan wadaago aqoonta ku saabsan Xeerka Shiinaha.
Marka hore, waa maxay Dhismayaasha Sare ee Sare ee Shiinaha Xeerarka?
Xeerarka, Nakhshadeynta dhismayaasha madaniga ah (GB 50352-2005) ayaa qeexaya dhererka dhismaha ee ka sarreeya 27m ee guryaha ama dhererka dhismaha ee ka sarreeya 24m warshad aan lakab lahayn, bakhaar, iyo dhismayaal kale oo isticmaalka madaniga ah.Marka uu dhismuhu ka kooban yahay dhismo dhaadheer, waa in uu raacaa habka ugu adag ee qaab-dhismeedka, ka-hortagga dabaysha, ka-hortagga dhulgariirka, dab-demiska, iyo wixii la mid ah, taas oo kordhin doonta kharashka.Markaa haddii ay tahay dhul cagaaran, macaamiishuna waxay inta badan igu casuumi doonaan inaan ka soo qayb galo qorshaha bilowga ah waxaanan siin doonaa naqshadaynta bakhaar kaas oo dhererkiisu ku dhow yahay 24 mitir laakiin aan ka badnayn.
24 m ASRS bakhaar loogu talagalay Iris ee Magaalada Tianjin